‘कायरा’ प्रोमो : कस्तो देखियो आर्यन र साम्राज्ञीको केमेष्ट्रि ? « Ramailo छ
‘कायरा’ प्रोमो : कस्तो देखियो आर्यन र साम्राज्ञीको केमेष्ट्रि ?
साउन १८ गतेलाई प्रदर्शन मिति तोक्दै फिल्म कायरा को प्रोमो रिलिज गरिएको छ । कायरा मा नायक आर्यन सिग्देल र नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले पहिलो पटक स्क्रिन सेयर गरेका हुन् । लक्ष्मण रिजाल निर्देशित फिल्मको ट्रेलर यस्तो बनेको छ :
चकलेटी नायक सिग्देल र पछिल्लो पुस्ताकी हिट नायिका साम्राज्ञीको जोडीलाई लिएर ‘कायरा’ को प्रोमो प्रतिक्षित थियो । प्रतिक्षित फिल्मको प्रोमोमा आर्यन क्युट देखिएका छन् भने साम्राज्ञीलाई बोल्ड अवतारमा देख्न सकिन्छ । आर्यन र साम्राज्ञीको जोडी फ्रेस छ । फिलिपिन्समा खिचिएका दृश्य सुन्दर छन् ।
आर्यन र साम्राज्ञीसँगै प्रोमोमा कलाकार शिशिर राणालाई पनि देख्न सकिन्छ । निर्माता तथा कथाकार समेत रहेका आर्यनले कायरा म्युजिकल लभ स्टोरी फिल्म रहेको आइतबार आयोजना गरिएको प्रेसमिटमा बताए । प्रेसमिटको भिडियो हेर्नुस् :